मेरो कथा न कसैले पर्दामा हेर्न सक्छ न कसैले किताबमा पढ्न नै सक्छ- श्वेता खड्का ! - Buletin Nepal
मेरो कथा न कसैले पर्दामा हेर्न सक्छ न कसैले किताबमा पढ्न नै सक्छ- श्वेता खड्का !
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी एक सफल अभिनेत्री श्वेता खड्का । खड्काले अहिले व्यापार र सिनेमासँगै बिभिन्न सामाजिक अभिनयान तथा सामाजिक सेवामा पनि कदम बढाएकी छिन् । श्वेता खड्का अहिले धेरैको लागि रोल मोडल बनेकी छिन् । तर उनको जीवनको यहाँसम्मको यात्रा त्यति सहज थिएन । पनौतीमा जन्मेर अहिले श्वेता खड्काका नामले स्थापित हुँदासम्म जीवनमा घटेका विविध घटना र रहस्यहरु उनले बाँडेकी छिन् । श्वेताको जन्म काभ्रे जिल्लाको पनौती नगर पालिका वडा नम्बर १२ मा भएको हो । त्यहि मेरो बाल्यकाल एकदमै रमाइलोसँग बित्यो । अहिले पनि मलाई मेरो बाल्यकाल फेरि फिर्ता आए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
बाल्यकालमा मेरा धेरै साथीहरु थिए । कहिलेकाही म उनीहरुको लिडर जस्तै हुन्थेँ भने कहिले निकै लजाउथेँ । मलाई जतिले पनि भेट्नुहुन्थ्यो सबैलै एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो । मेरो पढाइ भने सामान्य थियो । शिक्षकहरुले सधैँ मलाई पढ्न प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो । जब म किशोरावस्थामा प्रबेश गरे एकदमै पढ्नुपर्छ भन्ने खालको थिएँ । लजालु भएका कारण अरुको अगाडि गएर बोल्नु पर्यो भने मेरो कान रातो हुन्थ्यो । म एकदमै डराउँथे । बाटोमा हिंड्दा कसैले जिस्कायो भने साथीहरु बोल्ने गर्थे । तर म बोल्न पनि सक्दिनथेँ । चुप लागेर आफ्नो बाटो हिड्थेँ । त्यस्तो स्वभाव थियो मेरो किशोरावस्थामा । ब्याचलर पढ्दा त सबै केटीहरु सकिन्थे ।
मेरो घरमा पनि सबै जना दिदी बहिनीहरुको आत्मनिर्भर नभई विवाह भयो । विवाह पछि मात्र उहाँले काम गर्न थाल्नुभयो । १५÷१६ वर्षको उमेरमा पुगेपछि मलाई आत्मनिर्भर भएपछि मात्र विवाह गर्ने सोच आउन थाल्यो । मलाई उमेर बढाएर आर्मीमा लैजाने कुरा घरमा नभएको पनि हैन ।म सिनेमा तिर आएँ । मैले काम गर्न थालेँ आर्थिक रुपमा परिवारको लागि म बोझ भईन । चर्चित व्यक्तिहरुको बायोग्राफी पढ्थेँ । उनीहरुले त्यो सफलता कसरी पाए त्यसलाई नियाल्थेँ । व्यापारमा सफल व्यक्तिहरुको कथा पनि मैले पढ्थेँ ।
यी कुराले मलाई धेरै प्रेरणा दिएका छन् । मैले सानै उमेरमा व्यापार सुरु गरेको हो । जब मैले एस एल सी सकाउना साथ मलाई स्कुटर चलाउनु पर्यो । घरमा पनि मागेपछि ममी बुवाले दिईहाल्नुहुथ्यो । ममी बुवाले एक्दमै माया गर्नुहुन्थ्यो । अनि सानै उमेरमा अप्ठ्यारो बाटोमा स्कुटी चलाउनु परेका कारण मेरो ब्याक पेन शुरु भयो । पछि डाक्टरले शारीरिक व्यायाम र फिटनेसको सुझाव दिनु भयो । कहाँ भेटिएला खेलिसकेपछि धेरै सिनेमाको अफर आयो मलाई । तर मैले दादा श्री कृष्णसँग तीनवटा सिनेमामा काम गरेँ । अनि मैले श्री कृष्णकै अनुरोधमा कोहिनूर मा लगानी गरेँ । निर्माताको रुपमा सिने उद्योगमा प्रवेश गरेँ ।
मैले धेरै सिनेमामा काम गरिन । मेरो पूरा ध्यान व्यापारमै थियो । दर्शकले दिनु भएको मायाका कारण मैले वर्षमा एउटा जति सिनेमा खेलेको थिएँ । दर्शकले दिनु भएको मायाकै कारण मैले कान्छी सिनेमा बनाए । सबैको जिन्दगीमा दुख, सुख, उकाली ओरालीहरु आउँछन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । कुन बेलामा के हुन्छ भन्ने कुुरा कसैलाई थाहा हुँदैन । मैले शुरुमा धेरै रमाईलो गरेँ । बीचमा अचानक के के भयो भयो म मरेँ । म अहिले पहिलाको स्वेता खड्का नभएर नयाँ स्वेता खड्का हो जस्तो लाग्छ मलाई । मैले पुरानो कुराहरु बिर्सिएको छैन । तर अहिले मैले नयाँ जीवन पाएको छु ।
म एकपटक मरेर नयाँ जीवन जिउनको लागि अहिले दुःख गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ । उक्त घटनापछि मलाई सम्हाल्न खुबै गाह्रो भयो । ६ महिना सम्म ढाडको बिरामी भएँ । त्यो ६ महिना म ड्रिप्रेशनमा पनि गएँ । कोहीसँग बोल्न मन लाग्दैन्थ्यो । कफी र चिया खाँदा खाँदै गिलासहरु फुटाईदिन्थेँ । त्यो बेलामा मलाई केही थाहा नै हुँदैनथ्यो । तर अहिले त्यो पल सम्झिँदा लाग्छ त्यो बेला म एकदमै पिडामा थिएँ । दुःखमा थिएँ । त्यसपछि म दोस्रो उपचारको लागि अस्ट्रेलिया गएँ । दिन बित्दै जाँदा म निदाउन सक्ने भएँ । हाँस्न सक्ने भएँ । अरुसँग रमाउन सिकेँ । लुगा लगाउन सिकेँ ।
मेकअप गर्न सिकेँ । त्यो बेलामा मलाई आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दा एक्दमै डर लाग्थ्यो । अहिले त्यो बेलाका केही तस्बिरहरु युट्युबमा हेर्दा म यस्तो भएको थिएँ र जस्तो लाग्छ ।मेरो अनुहार सुन्निएको अनि तौल बढेको । म त सेलिब्रेटी पो थिएँ त सबैको प्रिय । म यसरी परिवर्तन भईसकेँ जस्तो महसुस हुन्थ्यो । अनुहार हेरेर मेकअप गर्दागर्दैै रुन्थेँ । कार्यक्रमको अफर आँउथ्यो । कपाल कोर्न खोज्थेँ तर सक्दिनथेँ । मेरा ती कुराहरु ती पीडाहरु कसैले सिनेमामा पनि हेर्न सक्दैन र किताबमा पनि पढ्न सक्दैन । जिरी अनलाईनबाट
प्रकाशित मिति २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार १६:३९